MCA No 1 race: OTK vs OKT soon to be joined by 'Porn Star' Chua!!!
Senior citizens to receive RM100 annually from the Penang government!
"Moderate" Palestinians name city square after mass-murdering jihad terrorist
Egypt scraps synagogue ceremony after Jews provoke "the feelings of millions of Muslims in Egypt and across the world"
Anwar says graft causing FDI drop. If not graft, then what? hehe...
Different values of caring the aged parents in Myanmar and in Developed countries (in Burmese)
Thank you, Taiwan Puppet Show and the team
Voters registration campaign in Air Itam 7th March 2010
I was named after this First Burmese Doctor who also translated the 1001 Arabian Nights into Burmese (in Burmese)
I found another grey hair on my head so I need another holiday
Posted: 16 Mar 2010 09:36 AM PDT
Ka Ting joins fray, to go for No 1
Former MCA president Ong Ka Ting said though he had promised in the past that he would not seek re-election, the current state of affairs with the party has made him reconsider.
Yet again, another Chinese leader (or ex-leader?!) that cannot keep to his words!
Cina pek tak tahu malu!
Posted: 16 Mar 2010 09:00 AM PDT
MALAYSIAKINI REPORT by Vasughi Supramanian
Finally at least one local administration in the country has woken up to the fact that the disabled need special attention so they can move around urban centres without any hassle and not just on paper.
Petaling Jaya City Council has decided to make the necessary changes in the city to createadisabled-friendly environment.
Posted: 16 Mar 2010 08:46 AM PDT
Senior citizens who are entitled to RM100 under the Senior Citizens Appreciation Programme want their cash from the Penang government to be either directly distributed or banked into their accounts.
Inapress statement issued today, Chief Minister Lim Guan Eng said the money (RM100 voucher) will be posted to recipients at their home addresses, to be redeemed at any Maybank branch, after the launch of the Senior Citizens Appreciation Programme in Kompleks Masyarakat Penyayang on Mar 21.
This latest move is to facilitate the disbursement of the funds and reduce inconvenience caused to senior citizens who would otherwise have to visitaconstituency underaPakatan Rakyat representative to receive the RM100.
Indeed, this gesture of goodwill is one small step towardsacaring society. Not even Mahathir in his 22 years as PM could do something similar under his vision 2020 to 'Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi'.
Posted: 16 Mar 2010 08:12 AM PDT
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) akan mengumumkan pendiriannya minggu depan berhubung pilihan raya pihak berkuasa tempatan (PBT) yang disyorkan oleh kerajaan negeri, Pulau Pinang dan Selangor.
Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof (kiri) berkata kajian teliti perlu dilakukan dari segi Perlembagaan dan undang-undang berkaitan sebelum menjawab dua surat yang diterima daripada kedua-dua kerajaan negeri tersebut.
Bagaimanapun, katanya, cadangan itu memerlukan kajian teliti kerana melibatkan pindaan undang-undang dan peraturan pilihan raya. — Bernama
SPR tak perlu berlakon atau bersandiwara dengan rakyat. Rakyat semua dah tahu bahawa SPR tidak akan menyetujui pilihanraya PBT. Mana rakyat tahu? PM, Najib sendiri sudah menolaknya.
Dan semua orang tahu sudah lama hilang kredibilitinya sebagai badan bebas dan profesional. Mana tahu, Pengerusi dan Timbalan Pengerusi SPR sendiri yang dah lama di dalam SPR tahu mengapa rakyat sudah tidak yakin dan percaya peranan yang dimainkan oleh SPR.
Posted: 16 Mar 2010 07:50 AM PDT
Posted: 16 Mar 2010 07:46 AM PDT
Editorialists around the world were quite right to bash the government of Binyamin Netanyahu for its in-your-face rebuke to Biden -- even though, as the analyst Stephen P. Cohen explains, the decision by right-wing ministers was meant also asarebuke to Netanyahu himself. These housing plans are more than just an irritant. They areacore issue. They proclaim the insistence of right-wing Israelis that all of Jerusalem will remain in Israeli hands on pragmatic grounds and because God wants it this way. For both reasons,asecond opinion is in order but not, as it happens, sought.
Washington's response to the Israeli government's announcement of additional housing was both harsh and appropriate -- an "affront" and an "insult," David Axelrod, President Obama's senior adviser, called it. He might have added "unnecessary" and "counterproductive." The incessant march of West Bank settlements and housing has to stop if there is to be any chance of reaching the vaunted two-state solution. At the same time, though, one of those states has to stop exalting terrorists.
Stop the settlements. Rename Dalal Mughrabi Square. Now let's talk. Richard Cohen in the Washington Post
Posted: 16 Mar 2010 07:40 AM PDT
The country's women need some empowering.
Malaysia's current female politicians are disappointingly of the wrong calibre and range from timid to tainted. The Perak BN senior exco member, Hamidah Osman said that females could not become chief ministers because the minister, in the course of her duties, would have to meet religious officers and the Sultan. Hamidah's other claim to fame is her derogatory comparison of Indians and snakes that earned her the pseudonym 'snake woman'. But women can just as easily betray their party. When Hee Yit Foong defected from the Pakatan Rakyat party, her action helped precipitate the downfall of the Perak government. She remains one of the most reviled women in Malaysia today and is also known as 'frog' or 'traitor'.
Posted: 16 Mar 2010 07:38 AM PDT
How did they do that? By allegedly dancing and drinking alcohol inside the synagogue -- which sounds as if it could have been an ordinary and reasonable celebration under the circumstances. But Egyptian officials preferred to portray it as the dhimmis getting out of line.
CAIRO (AFP) - Egypt cancelled the formal opening Sunday ofarenovated 19th-century synagogue in Cairo to protest what antiquities chief Zahi Hawass said were "provocative" Jewish and Israeli action. Hawass and Culture Minister Faruq Hosni were due to attend the event,aweek after 150 people, including rabbis and the US and Israeli ambassadors, attended the rededication of the Maimonides synagogue.
Hawass, citing press reports, said inastatement that the cancellation comes after "provocative" acts during the March7ceremony in Cairo's ancient Jewish quarters by the Jewish community. He referred to "dancing and drinking alcohol in the synagogue, as reported by several newspapers" and said these acts "were seen to provoke the feelings of millions of Muslims in Egypt and across the world."
The decision was also taken at "a time when Muslim holy sites in occupied Palestine face assaults from Israeli occupation forces and settlers," Hawass said. He was referring to clashes at Jerusalem's Al-Aqsa Mosque compound and plans to include two contested West Bank holy shrines onalist of Israeli heritage sites. Hawass said this was alsoa"provocation."
The synagogue of Maimonides, known in Egypt by its Arabic name of Musa bin Maymun, is named after the 12th century Jewish scholar, philosopher and physician. Egypt began restoration of its Jewish sites several years ago.... Yahoo News. Hat tip: Jihad Watch
Posted: 16 Mar 2010 07:22 AM PDT
Posted: 16 Mar 2010 08:36 AM PDT
KUALA LUMPUR, March 16 — Datuk Seri Anwar Ibrahim has claimed the Barisan Nasional government's poor governance and "endemic corruption" are behind falling foreign direct investment (FDI) in Malaysia.
"Some important considerations have to be taken into consideration. Based on an Unctad report on December last year, the ability of Malaysia to attract foreign investments has dropped from number 62 to 66," Anwar (picture) said after the ministry's reply.
He then cited reports which, he claimed, proved Malaysia's drop in standing.
"Malaysia's figure stands at RM22.1 billion, while Singapore RM75.5 billion. Thailand and Indonesia have recorded RM27 million each.
"Why is Malaysia now trailing behind countries which were once behind Malaysia in development?" asked Anwar.
The minister, Datuk Mustapa Mohamad, charged that Anwar's claims were misguided and that Malaysia's economy was steadily improving.
"The economy of the country is stabilising. The unemployment rate dropped 3.6 per cent last year," he replied.
"Things have become more competitive, but this does not mean the economy is declining," said Mustapa.
"If there is no pull factor, why do so many Japanese companies want to invest here?" asked Mustapa.
Even if investments do come in, WHO really benefits? The rakyat is still feeling the pinch. Prices of food have not gone down. Coffee shops in PJ are charging RM1.50 foraglass of barley. RM4.50 for economy rice with2types of vegetable and 1 type of meat.
Posted: 16 Mar 2010 07:01 AM PDT
ဒီ နိုင်ငံ တွေ မှာ.. အသက်ကြီး တဲ့ အခါ.. အထီးကျန် ဆန် ကြတယ် ဆိုတာ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. တယောက်ချင်း အခြေအနေ နဲ့ လည်း ဆိုင်မှာပါလေ…။ သားရင်း သမီးရင်း ရှိတဲ့ လူကြီးတွေ တောင်…ဒီလိုပဲ ဆိုတော့.. ဘ၀ ဆည်းဆာ ကို တွေးမိ လုိုက်ရင်… ရင်ခုန် စိတ်ခြောက်ခြား စရာ ကောင်း တာတော့..အမှန်..။ အခု.. အန်တီ လို..တူတွေ တူမတွေ ကရော.. လိုတာလေး ၀ယ်ပေး.. နေမကောင်း လာမေး ဆိုတာလောက် အပြင်.. ဘာပို လုပ်ပေး ကြ မလည်း…။ တလောက.. ဒီမှာ ရောက်နေတဲ့.. မြန်မာပြည်က..နာမယ်ကြီး ဆရာဝန်မကြီး တယောက် တောင် ..သားသမီး ၃ ယောက်လုံး..တနိုင်ငံတည်း အတူ ရှိနေရက် နဲ့.. ပင်စင်အိမ်လေး ထဲမှာ..တယောက်တည်း မူးလဲ ရင်း.. နောက်ဆုံး.. ဘိုးဘွားရိပ်သာ မှာ.. ဘ၀ နိဂုံး ချုပ်သွားတယ် လို့ ကြား ဘူး ထားတော့… အင်း… ဘာပြောရမှန်း.. ဘာ တွေ မျှော်လင့် ရ မှန်းတောင် မသိတော့ ဘူး ..ဆိုသလို ဖြစ်နေ တော့တယ်။
ဟိုး..ဖုန်ထူထူ မြို့လေးမှာ နေတဲ့.. . အသက် ၇၀ ကျော် ဖေဖေ့ ကို..အရိပ်တကြည့်ကြည့်.. ကျွေးမွေး ပြုစု နေတဲ့.. အမ ကိုလည်း.. ချီးကျူး ကျေးဇူးတင်နေ မိတယ်။ မမကြီး နဲ့ အတူနေရင်း.. ရန် တကျက်ကျက် ဖြစ်နေတတ် တဲ့..အသက် ၆၀ ကျော် မေမေ့ အတွက် လည်း.. အဲဒီ တကျက်ကျက် လေး တွေ သာ.. မရှိရင် တော့လေ… လို့.. ရှာကြံ စိတ်သက်သာ နေ မိ ပြန်တယ်။
ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ က.. လူနေမူ ပုံစံ လေး တွေ ထဲက..နှစ်လို စရာလေး တွေ ဆွဲထုတ် ရင်း.. အသက်တွေ.. ၇၀..၈၀..၉၀ ကျော် နေကြပေမဲ့.. ခေတ်ဝန် ကို.. အတိုင်းအဆ အမျိုးမျိုး.. ထမ်းရင်း..ခေတ်လမ်းကို.. မမောတန်း လျှောက်နေကြတဲ့.. မြန်မာပြည်က… လူကြီးသူမ တချို့ ကို လည်း… ချီးကျူးပူဇော် နေ မိတယ်။
ဘာပဲ ပြောပြော..ခေတ်တွေက..မတူတော့ တာ..အမှန် မို့..လူနေမူ ဘ၀ ပုံစံ တွေ လည်း.. " ငါ့ ကျရင်.." လို့..ဘာမှ ကြိုတင် တွက်ချက် ထား လို့ ရနိုင်မည် မထင်…။ တကယ်တော့.. အိုချင် တိုင်း တောင် အိုလို့ မရ နိုင် … ကိုယ်မပိုင် တဲ့.. အချိန် အပိုင်း အခြား တွေမို့…
အသက် ၈၀ ကျော် ဘဘဦးဝင်းတင် ပြောတဲ့…
" အတောင်သာလျှင်ဝန်ပါတဲ့..ငှက် ရဲ့ စိတ်" နဲ့…
ဘ၀ ကို ဆက်လျှောက်ဖို့ရန်သာ…။
အတောင် Mar 16, 2010
အန်တီ့ မှာ.. ဟန်းဖုံး မှ မရှိတာ….
ငါကလည်း.. လူတကာ ကို.. လူတိုင်း လို ပဲ သတ်မှတ် နေ မိလား မသိဘူး…
ဒီခေတ်ကြီးထဲ.. လက်ပတ်နာရီ မပတ်တဲ့ သူတောင် ရှိတာ..လက်ကိုင်ဖုန်း မကိုင်တဲ့ လူရော.. ရှိမှာပေါ့..
ပြီး.. မနေ့က.. အန်တီ နဲ့ စကားပြော ကတည်းက.. သူ့မှာ ဟန်းဖုံး မရှိတော့တဲ့ အကြောင်း.. ပြောဖြစ်ကြ သေးတာပဲ… ငါကတောင် ပြောလိုက်သေးတာပဲ.. အန်တီ ဒီအသက်ဒီအရွယ် တယောက်တည်း ဆိုရင်တော့..လုံခြုံရေး အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. ဟန်းဖုန်းလေး တခု တော့..ဆောင်ထားသင့် တယ်လို့….။
" သူတို့ နှစ်ယောက်က လည်း ပြောပါတယ်..၀ယ်လည်း ပေးထား ဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း.. အန်တီ့ကို ဘယ်သူမှ လဲ မဆက်ကြတော့.. ဆက် မသုံး ဖြစ်တော့ တာ…" တဲ့…
ခက်လိုက်တာ….။ ပြောရရင်…ကိုယ် နဲ့လည်း ဆိုင်လှ တာ မဟုတ်… ။ ဒါက..သူ့ တူ ၂ ယောက် ကိစ္စပဲ…။ သားရင်း သမီးရင်း မရှိရှာတဲ့..အသက် ၈၀ ကျော် အဘွားကြီး တယောက် အတွက်..ခင်ပွန်းသည် လည်း မရှိရှာ တော့..တဲ့ နှစ်တွေ မှာ… ကျွေးမွေးပြုစု နှစ်အတော်ကြာ အတူနေခဲ့တဲ့..တူ ကလည်း… အိမ်ခွဲ ဆင်းသွား ပြီ ဆိုတော့.. အတော် ခံစား အထီးကျန် နေရှာမယ် လေ … လို့.. ကိုယ်ချင်းစာ ရင်း… တတ်နိုင်တဲ့ အချိန်လေး တွေ မှာ..အဖော်လုပ်ပေး နေမိ တာပါ…။
တကယ်က.. တော်တော်လေး ဝေး တဲ့..ရပ်ကွက် က..သူ တယောက်တည်း နေတဲ့.. အိမ်လေး ကို.. သွားဖို့ ဆိုတာ.. ကိုယ့် အတွက်တော့.. မလွယ်လှပါဘူး..။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်.. ဆုံးသွားရှာပြီ ဖြစ်တဲ့..အန်ကယ် စိုက်ခဲ့တဲ့… ခြံ နောက်ဖေးက.. ဒန့်ဒလွန်သီး တွေ..ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်တွေ.. သရက်သီးတွေ.. အဲဒီလို.. ရှားပါး..ဗမာစာ တွေ လိုချင် တဲ့ အခါ သာ.. ညာတာ ပါတေး.. ကိတ်မုန့်လေး တဗူး ကိုင်ပြီး.. ရောက်လေ့ ရှိတာ..။ ကိုယ့်နဲ့ သွေးလည်း မတော်.. အရွယ်ခြင်း မတူ.. အတွေးခြင်း..အနေခြင်း ကွာ..ပြောစရာ စကား မနည်း ရှာ ရမဲ့.. မိတ်ဆွေ တယောက်ကို.. အချိန်ပေး ဖို့.. ကိုယ့် အတွက်…အတော် မလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ…။
ခုတော့.. အသက် ၈၀ ကျော် အန်တီက..သူနေတဲ့..မြို့ထဲကို..ဘက်စကား စီးပြီး လာလည်မယ်.. ဈေး နားက..ကက်သီဒရယ်..ဘုရားကျောင်း ကြီးမှာ.. တွေ့ကြမယ် ဆိုပြီး..ချိန်းရော..။ တကယ်တော့.. အန်တီ့ကို မလာစေချင်…။ သွားရင်း လာရင်း တခုခု ဖြစ်သွားရင်.. ကိုယ်ပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရမှာ…။ ခက်တာက.. လူ့သဘော ကလည်း.. အရက်မူးနေပြီ.. သတိထား ဆိုရင်… ငါက..မူးပေမဲ့..ဘယ်တော့ စကားမမှားဘူး လို့.. ဆတ်ဆတ်ထိ မခံ နိုင်သလို.. ရထားပေါ်..ကားပေါ်.. လူကြီးတွေ တက်လာတိုင်း လည်း.. ကိုယ်က..နေရာပေး လို့ ..ကျေနပ် သဘောကျ ချင်မှ ကျတာလေ ..။
ကဲ..လာချင်လည်း လာပါစေ ဆိုပြီး.. နေ့လည်စာ တချို့ ပြင်ဆင် နေမိတာ…။ ၁၂ နာရီ ကျော် စ ပြုတော့.. ဖုန်းလဲ မခေါ်သေးပါလားပေါ့.. အိမ်ကို လှမ်းဆက်ကြည့် တော့လည်း.. ကိုင်မဲ့သူ မရှိတော့..။ ဒါနဲ့.. အိမ်ရှင်း..ရေချိုးပြီး.. အင်တာနက် မှာ..စာဖတ်ရင်း..ဆက်စောင့်.. ။ .
ညနေ သုံးနာရီ ထိုးတော့မှ… အန်တီ့ ဆီက..ဖုန်းဝင်လာတယ်..။ သူ ဘုရားကျောင်းမှာ..တနာရီ ကျောင်အောင် စောင့်သေးတယ်..ခုတော့..အိမ်ပြန်ရောက် ပြီ တဲ့…။
I'm so sorry aunty လို့သာ.. ပြောနိုင် တော့တယ်..။ ငါက.. လူကြီး တယောက် ကို လုံလောက်အောင်.. အာရုံမစိုက်မိ တာလား.. မဟုတ်ဘူး..ငါ လည်း သေချာ..ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ် နေတာပါပဲ..။ သေချာ တာတော့.. ရွယ်တူ သူငယ်ချင်း တယောက် နဲ့ ကော်ဖီထွက်သောက်ဖို့.. လောက် .. အာရုံ မစောနေမိ.. လုံ့လ မရှိနေမိတာ.. သာ ဖြစ်မည်..။ ကဲ..ဘာတတ်နိုင်မှာ လည်း လေ..။ ဒါတောင်..အန်တီက.. ဒီနေ့ လုပ်ထားတဲ့ မုန့်တွေ အလကား မဖြစ်အောင်..နက်ဖန် လည်း.. တိုင်ချီး မနက် သင်တန်း အပြီး.. မြို့ထဲကို..ဘက်စကား နဲ့ လာ ခဲ့ အုံးမယ် တဲ့…။
" ရပါတယ်.. အန်တီရယ်…. ပင်ပန်းမှာ စိုးလို့ပါ.. " ပြောရင်း..စကားက.. အဆုံးသတ် မပါတာ ကို သတိထားနေမိတယ်။
ကိုယ့် အသံ ကိုယ် ပြန်ကြား နေ ရတာ လား….. ကိုယ့် ကို ကုိုယ် ပြန်မြင် နေ ရ တာလား.. တခုခုပဲ…။
Posted: 16 Mar 2010 06:27 AM PDT
Ahli Parlimen Kubang Kerian Salahuddin Ayub hari ini berkata jarak telaga minyak melebihi tiga batu nautika bukanlah alasan untuk Kelantan tidak memperoleh hasil royalti daripada Petronas.
Ini dibuktikannya melalui contoh dua dokumen perjanjian royalti Petroleum Kelantan pada 19 Mei 1975 melalui Menteri Besar ketika itu Allahyarham Datuk Nasir Muhammad serta dokumen perjanjian Petronas dengan kerajaan Terengganu pada 16 September 1978.
"Dalam surat yang dihantar Petronas kepada pegawai kewangan Terengganu pada 16 September 1978, telaga minyak di Terengganu itu berada di luar melebihi tiga batu nautika dan surat ini menyebut dengan jelas bahawa anggaran bayaran royalti minyak petroleum pada tahun 1979 berjumlah RM3.2 juta.
"Malah penjanjian antara Petronas dan kerajaan Kelantan yang ditandatangani pada Mei 1975 oleh Menteri Besar ketika itu membuktikan tidak wujud syarat tiga batu nautika dalam hak untuk mendapatkan wang royalti minyak, katanya kepada pemberita di lobi Parlimen hari ini.
Salahuddin berkata melalui kedua-dua contoh perjanjian tersebut jelas membuktikan isu jarak telaga minyak sejauh tiga batu nautika bukanlah alasan utama kerajaan Barisan Nasional enggan memberikan royalti kepada Kelantan selagi mana ia berada di pesisiran pantai negeri terbabit.
"Tidak timbul langsung isu tiga batu nautika, 'onshore' atau 'offshore', mahupun pemberian wang ihsan kerana yang penting selagi mana ia diletakkan di perairan negeri maka Petronas perlu membayar royalti5peratus," katanya.
Beliau menambah bukti ini sekaligus menepis dakwaan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum ini menggariskan syarat perjanjian sesebuah negeri untuk menerima royalti.
"Dua dokumen yang saya kemukan ini merupakan hujah yang cukup kuat untuk kita menafikan langsung tentang isu tiga batu nautika dan isu wang ihsan sepertimana jawapan yang diberikan oleh PM dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada sesi Parlimen yang lepas," katanya.
Berikutan itu, Salahuddin pada 10 Mac lalu menghantar usul untuk membahaskan isu ini dalam Dewan Rakyat semasa penangguhan sidang Parlimen bagi penggal ini nanti.
Namun usul itu ditolak Speaker Dewan Tan Sri Pandikar Amin Mulia pagi ini atas alasan isu ini bukanlah perkara yang perlu segera diselesaikan.
"Sebagai wakil rakyat Pakatan Rakyat Kelantan, saya berjanji akan terus perjuangkan isu ini dalam perbahasan akan datang kerana banyak lagi bukti dokumen yang akan dibawa kelak," katanya.
Dewan Rakyat Tolak Usul Royalti Minyak
KUALA LUMPUR, 16 MAC - Dewan Rakyat hari ini menolak usul Ahli Parlimen Kubang Kerian, Salahuddin Ayub bagi menangguh sidang Parlimen kali ini untuk membahas atau memanjangkan isu royalti minyak Kelantan dengan alasan ia bukan perkara yang perlu disegerakan.
Salahuddin berkata, usul itu dihantar pada 10 Mac lalu selepas penemuan dua dokumen penting yang membuktikan jawapan Perdana Menteri dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada sesi Parlimen lepas merupakan jawapan yang sama sekali tidak menepati perjanjian digariskan oleh Petronas.
"Saya telah mendapat beberapa penemuan baru selepas parlimen ditangguhkan akhir tahun lepas. Dan kita tetap tidak bersetuju sama sekali dengan jawapan yang awal oleh YAB Perdana Menteri dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri tentang isu tiga batu nautika,"katanya.
Dua dokumen yang diperoleh oleh Salahuddin itu membuktikan bahawa Terengganu telah menerima bayaran wang royalti sepertimana termaktub dalam perjanjian di antara Petronas dan kerajaan Terengganu.
"Yang pertama ialah surat Petronas kepada kerajaan negeri Terengganu yang dihantar oleh Petronas pada 16 September 1978, kalau isu tiga batu nautika itu dipersoalkan, memang telaga-telaga minyak di Terengganu itu berada di luar, melebihi tiga batu nautika dan surat ini Petronas kepada pegawai kewangan yang menyebut dengan jelas bahawa anggaran bayaran royalti minyak petroleum 1979 yang berjumlah RM 3.2 juta. Ini disebut sebagai bayaran royalty,"katanya.
Malah penjanjian di antara Petronas dan kerajaan Kelantan yang ditanda tangani oleh Menteri Besar ketika itu, Datuk Mohd Nasir pada 19 Mei 1975 membuktikan tidak wujud syarat tiga batu nautika dalam hak untuk mendapatkan wang royalti minyak.
"Ini telah menunjukkan bahawa tidak timbul langsung isu tiga batu nautika, onshore atau offshore, yang penting selagi mana ia diletakkan di perairan negeri tersebut maka Petronas perlu membayar royalti5peratus, jadi, dua dokumen yang saya kemukan ini merupakan hujah yang cukup kuat untuk kita menafikan langsung tentang isu tiga batu nautika dan isu wang ihsan sepertimana yang diberikan oleh jawapan oleh PM dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada sesi yang lepas,"katanya. -TVS
Posted: 16 Mar 2010 06:19 AM PDT
"Beberapa pertimbangan penting perlu diambil kira. Berdasarkan kepada laporan Unctad pada Disember 2009 daya tarikan FDI Malaysia jatuh daripada tangga 62 kepada 66," komen Ketua Pembangkang setelah mendengar jawapan menteri.
"Mengapa Malaysia ketinggalan di belakang negara-negara ini yang pada satu ketika dahulu ketinggalan jauh belakang Malaysia dari segi pembangunan?" tanya Anwar. SK/TVS
Posted: 16 Mar 2010 04:38 AM PDT
Thank you for the team who has helped me to run the Taiwan puppet show in Air Itam Tua Peh Kong (next to my service center). Without you, this will not beascusses.
Posted: 16 Mar 2010 04:12 AM PDT
Thank you for my team who has spentasunday morning to register for new voters.
Posted: 16 Mar 2010 03:57 AM PDT
I was named after this First Burmese Doctor who also translated the 1001 Arabian Nights into Burmese.
That doctor's name was Dr Syed Abdul Rahman.
By the way my father's name is Sheik (Syed) Mohammad Zafrudin. So my real name should be Dr Sheik Abdul Rahman.
For Myanmars who do not know about the history of Malaysia_
Malaysia's first Prime Minister was Tunku Abdul Rahman or Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. I wrote to him from Burma, applying for the job. His Secretary General Dato' Ahmad Noordin replied my letter and later given me the job.
Malaysia's first King was Tuanku Abdul Rahman ibni Almarhum Tuanku Muhammad.
တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များ ကို မြန်မာမှုပြုခဲ့သူဦးဖိုးသာဇံခေါ် ဒေါက်တာအက်စ်အေရာမန်သည် ၂၉ ဇူလိုင်၁၉၁၆တွင်မေမြို့(ပြင်ဦးလွင်) ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသည်။ ၁-၈-၁၉၁၆ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်ဂေဇက် သတင်းစာတွင် ဒေါက်တာရာမန် ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်သူအပေါင်းမှာလည်း တတ်ကျွမ်းသော ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဒို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကြီးများ
မြန်မာမွတ်စလင်ကျောင်းသားလူငယ်များ(MMSY 3နှစ် မြောက် အမှတ်တရ)
သမားတော်ကောင်း တစ်ယောက်နှင့်တာဝန်သိသိဇွဲရှိရှိ ဆောင်ရွက်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဆုံးရှုံးကြရလေသည်'
ဟူ၍ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ဦးဖိုးသာဇံသည် သရက်မြို့ဝန်သမီးဒေါ်ယုနှင့်စုံဖက်ကာ သား၊သမီးလေးဦးဖွားမြင်ခဲ့ရာ
သား အကြီးဆုံး ဦးဘတင်မှာ နောင်ရုပ်ရှင် ပြဇာတ်နှင့်မြန်မာစာ၊ မြန်မာမှုတို့ ၌ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ဒဂုန်
၁။ အမျိုးသားရေးနှင့်မြန်မာ့ဆေးပ ညာရှင်များ (ဆရာဝန်တင်ရွှေ)
၃။ စာဆိုတော်များအတ္ထုပ္ပတ္ထိ (မောင်ခင် မင်-ဓနုဖြူ) ငွေတာရီ ၁၉၉၆(မောင် သုတ)
၄။ တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များဖော်ပြပါဆောင်းပါးသည် (သခင်ဘသောင်း)အဋ္ဌမအကြိမ်Weekly Eleven ဂျာနယ်မှ ကူးယူဖော်ပြချင်းဖြစ်ပါသည်
ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဒို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကြီးများ Page- 31 -မြန်မာမွတ်စလင်ကျောင်းသားလူငယ်များ
(MMSY 3နှစ် မြောက် အမှတ်တရ)
ဒေါက်တာ ရှိတ် အဗ္ဗဒူရာမန်
L.R.C.P & L.R.C.S (Edin) L.F.P.S ( Glas)
ဒေါက်တာရာဟင်ဘောက်နှင့် သရက်မြို့သူ မြန်မာအမျိုးသမီး ဒေါ်သက်၏သား ဖြစ်သည်။ ၁၈၇၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၁
မြန်မာအမည်မှာ ဦးဘိုးသာဇံဖြစ်သည်။ ၁၈၈၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဆရာဝန် ရာထူးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယမှရသည့် ဒီဂရီနှင့် မတင်းတိမ်နိုင်သည့်အတွက် ဗြိတိသျှနိုင်ငံမှ ဆေးပညာဒီဂရီကို သွားရောက်ဆွတ်ခူးခဲ့သည့် ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုး ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၀၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၀၅ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၇ ရက်တွင် ဒိစတြိတ်
၁ ဇန်နဝါရီ ၁၈၇၀ - ၂၉ ဇူလိုင် ၁၉၁၆)ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ဒေါက်တာ ရှိတ် အဗ္ဗဒူရာမန်(ခေါ်) ဒေါက်တာ အက်စ်အေရာမန် ( Dr.S.A.Rahman ) ၏(၉) လအတွင်း ဆေးပညာဘွဲ့ဆွတ်ခူးခဲ့သည့်အတွက်(ခရိုင်) ဆရာဝန်ကြီးအဖြစ် ရာထူတိုးမြှင့် ခံရသည်။ ထိုရာထူးကို မြန်မာလူမျိုးတို့အား မည်သည့်အခါကမျှ မပေးခဲ့ချေ။မြန်မာလူမျိုးတို့ အနက်ပထမဆုံး ခရိုင်ဆရာဝန် ရာထူးကို ရရှိခဲ့သည်။ ထိုရာထူးဖြင့် သုံးခွ၊ ရမည်းသင်းရွှေဘို၊ ဖျာပုံ၊ကသာမြို့များသို့ သွားရောက်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၀၇ တွင် ကျောက်ကြီးရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ဟံသာဝတီခရိုင်တွင် တာဝန်ကျသည်။ ပလိပ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နှိုးဆော်ရေးတာဝန်ကို ရန်ကုန်မြူနီစီပယ်အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာစာပေတွင် ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်သောကြောင့် ပထမသူနာပြုသင်တန်းစာကိုပြုစုပေးခဲ့သည်။ သို့သော် မပြီးဆုံးခဲ့ချေ။ မြန်မာစာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ လုပ်ငန်း တာဝန်ကျေပွန်မှု၊ ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေမှု၊လူထု၏ ချစ်ခင်လေးစားမှုတို့ကြောင့် ကြီးလေးသောတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည်။ သူ့တွင် ဆီးချိုရောဂါရှိနေမှန်းသိသော်လည်း ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေသော ကာလဖြစ်၍ စစ်မြေပြင်သို့သွားရန်ဆရာဝန်အမြောက်အမြား လိုနေသောကြောင့် အနားယူ ဆေးကုခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး တိုင်းပြည်အပေါ်ကိုယ်ကျိုးစနွ့်၍အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၁၆ ခု ဇူလိုင် ၂၉ ရက်၁၉၁၆ ခု ဩဂုတ်လ ၁ ရက် အင်္ဂါနေ့ထုတ် ရန်ကုန်ဂေဇက် သတင်းစာတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဒေါက်တာရာမန်ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်သူများ အပေါ်တတ်ကျွမ်းသော သမားတော်ကောင်းတစ်ယောက်နှင့်တာဝန်သိသိဇွဲရှိရှိ ဆောင်ရွက်တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဆုံးရှုံးကြလေသည် ဟုဂုဏ်ပြုရေးသားခဲ့သည် ။
ဆရာဝန်ကြီး အက်စ်အေရာမန်သည် မြန်မာစာပေလောကတွင် တစ်ထောင့်တစ်ည ပသီပုံပြင်ဝတ္တုကြီးကိုပထမဆုံးမြန်မာဘာသာပြန်သူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားခဲ့သည့်Entertainment စာအုပ်အရွယ်မှာ အလျား ၈လက်မခွဲ၊ အနံ ၅ လက်မရှိပြီး စာမျက်နှာ ၆၆၁ မျက်နှာပါဝင်သည်။ အဖုံးမှာ ကတ်ထူအဝတ်ဖုံး အနီရောင်ဖြစ်ပြီး ဘေးဘက်တွင် ရွှေစာလုံးကြီးဖြင့် ပသီပုံပြင်ဝတ္တုအကြီးအကျယ် ပထမတွဲဟုရိုက်နှပ်ထုတ်ဝေသည်။ အဖိုးငွေ ငါးကျပ်ဖြင့် ရောင်းခဲ့သည်။ စာအုပ်မှာ လူကြိုက်များသည်။ ငွေငါးကျပ် မတတ်နိုင်သူ များကြောင့်း စာဖတ်သူများ အခက်အခဲကြုံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံပြင် ၈ ပုဒ်ကို ရွေးထုတ်၍ တစ်ကျပ်တန်စာအုပ်အဖြစ် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပညာရေးဌာနက မြန်မာစာဖတ်စာအုပ်အဖြစ် ပြဌာန်းသည်။ ပြဌာန်းချက်စာအုပ်အဖုံးတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ အတွင်းမျက်နှာဖုံးတွင်မူကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီတုိ့ပြဌာန်းထားသည့် ပသီပုံပြင်ဝတ္တုကြီးဖော်ပြထားသည်။ ရန်ကုန်မြို့ဗြိတိသျှဘားမား ပုံနှိပ်တိုက်က ၁၈၉၉ တွင် ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်။ကျောင်းသုံးပြဌာန်းသော ပသီပုံပြင်ဝတ္တုကြီးတွင်အလီဘာဘာနှင့် ဓားပြကြီး လေးကျိပ်တို့အကြောင်း၊ကမာရက်ဇမန်မင်းသားနှင့် ပဒေါင်းရာမင်းသမီး၏အကြောင်း၊ ဆင်းတဘက်နှင့် သူဆင်းရဲကူလီ၏အကြောင်း
အာလာဒင်နှင့် ဣစ္ဆာသယမှန်အိမ်အကြောင်း၊ ကြေးဝါမြို့ကြီး၏အကြောင်း ညီမငယ်အားမနာလို(အသက် ၄၆ နှစ် ၆ လ အရွယ်)တွင် မေမြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။Arabian Nightခေါ် အာရေဗျ နိုင်ငံ၏ ညအခါ ဖျော်ဖြေရန်ဝတ္တုကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထုတ်ဝေသည်။The Arabian Nights Readerဟုစာအုပ်အမည်နှင့် ဘာသာပြန်သူ အမည်ကိုS.A Rahman ဟု]ဆဌမ၊ သတ္တမ၊ အဌမနှင့် နဝမတန်းများတွင်ဖတ်ရန်} ဟု မြန်မာဘာသာ၊ အဂင်္လိပ်ဘာသာတို့ဖြင့်
ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဒို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကြီးများ
Page- 32 -မြန်မာမွတ်စလင်ကျောင်းသားလူငယ်များ
Posted: 16 Mar 2010 03:55 AM PDT
我跟suli说：你看，这么多人会要听我的歌，好不好就做一张《周金亮自弹自唱老"乡" 好》？她回我：有100个人喜欢我们才考虑，我算过了，如果这100人各买一张，每一 张卖RM30.00，公司大约还要亏RM33,000.00，你要不要投资，老板？我睁 开双眼，梦醒了！走回自己的小房间，用尽所有的力气拨动我的吉他，撕心裂肺的唱：在残酷的唱片市场（歌 曲《老乡》原词：在顽固的东京街头......）！
星期天凌晨，我把12首歌曲混音完毕的JZ8置入车上的CD机，音 乐与歌声流出，填满了车厢。这两年来为之焦虑、为之振奋、为之欣喜的JZ8终于来到了一 个让自己抽离以第三者来聆听的阶段......夜是那么的宁静，JZ8Lydia 的歌声和泽相的钢琴让我更加剧烈的坚信：失去音乐，生命将会是一场遗憾！再次 祝福JZ8和不分昼夜为之付出的团队。音乐万岁！
Posted: 16 Mar 2010 03:24 AM PDT
Shahid (Arabic: شَهيد ‎ šahīd, plural: شُهَداء šuhadā', also romanized as shaheed) is an Arabic word meaning "witness". It isareligious term in Islam, meaning "witness", as stated, but most often "martyr." It is used asatitle for Muslims who have died fulfillingareligious commandment, or waging war for Islam. (Wikipedia)
A woman is considered "shaheeda" (شهيدة) if she died during fulfillment ofareligious commandment, but there is an argument among the Muslim sages as to whetherawoman can participate inawar for religion. (Citation needed) There are examples of women fighting in war such as Nusaybah.
" Think not of those who are slain in Allah's way as dead. Nay, they live, finding their sustenance in the presence of their Lord; They rejoice in the bounty provided by Allah. And with regard to those left behind, who have not yet joined them (in their bliss), the (martyr's) glory in the fact that on them is no fear, nor have they (cause to) grieve. „
" Allah hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the Garden (of Paradise): they fight in His Cause, and slay and are slain:apromise binding on Him in Truth, through the Torah, the Gospel, and the Quran: and who is more faithful to his Covenant than Allah? Then rejoice in the bargain which ye have concluded: that is the achievement supreme. „
Islam's prophet Muhammad is told to have said these words about Martyrs:
" The martyrs requested of Allah the following; "For the sake of you, o Allah, send us back to the world again so that we may be martyred once more". „
Muslims also believe that Allah grants the reward of martyrdom to those who die inavariety of ways, including death during childbirth, accidents such as fires and drownings, and epidemic diseases such as the plague.
Regardless of how death occurred, Muslims believe that the reward of martyrdom is contingent upon proper belief, sincerity, perseverance and thankfulness to God.
The term has also been used in this narrower sense by Arab Christians and by some Hindus but on the contrary by millions of Sikhs who have given their lives' since the founding of the religion by Guru Nanak Dev Ji.
A Muslim who is killed defending his or her property (Sahih Al-Bukhari, Book 43, Number 660) is consideredamartyr.
ဆရာကြီးလေးပါးမှာ ပြည်ရွှေဘိုတွင် စုပေါင်းနေထိုင်ခဲ့သူများမဟုတ်ပဲ ဒေသခွဲများတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်ကြပါသည်။
ဘုရင်မင်းမြတ် အမျက်တော်ရှ၍ ဆင့်ခေါ်တော်မူချိန်မှသာ ရွှေဘိုမင်းနေပြည်တော်သို့ စုရုံးရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး
ပြစ်ဒဏ်သင့်ခံခဲ့ရသော သူတော်စင် အစ္စလာမ်သာသနာဝင်ကြီးများဖြစ်ကြပါသည်။
ပေါ်ပေါက်သည်ကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ၀ိနည်းတော်နှင့်အညီ ရဟန်းတော်များကို ကျင့်သုံးစေသည်။ ၀ိနည်းတော်ကို
မရိုမသေ မလိုက်နာသူတို့အား ဒဏ်ခတ်စေရန် မဟာဒါန်ဝန် ခန့်အပ်သည်။ ၁၇၅၉
သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေးအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် ကိုးကွယ်မှုအမျိုးမျိုးအား သန့်ရှင်းစေခဲ့ရာ
ပသီမွတ်စ်လင်မ် တို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းအား မေးမြန်းစဉ် ဂေါဝိန္ဒပုဏ္ဏား၏ လျှောက်တင်မှုအရ ပသီမွတ်စ်လင်မ် တို့အား
ဆင့်ခေါ်တော်မူပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့သည်တွင် သာသနာ့ယုံကြည်ချက်အား လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။
ဂေါဝိန္ဒပုဏ္ဏားစကားနှင့် ညီညွတ်သည်ဟု မင်းတရားကြီးထင်မှတ်တော်မူပြီး ဆရာကြီး
အယူလွဲမှားနေသည်။ တရားဒေသနာတော် ဟောကြားပြုပြင်ရန် အချုပ်အာဏာသားတို့လက်သို့ လွှဲအပ် ခဲ့သည်။
မလိုက်နာငြင်းဆန်က စီရင်ရန် အမိန့်ချမှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ဆရာကြီး
နောက်သားမြေးတို့အရေးမြော်တွေးပြီး ယုံကြည်ချက်အတွက် အသက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာကြီး
ထိုအချိန်တွင် ဥပ္ပါပျံ၊ တော်လဲ၊ ငလျင်လှုပ်၊ မှောင်ကြီးကျပြီး ကုန်းဘောင် ရွှေပြည်တွင် မိုးကြိုး
တစ်ပြိုင်တည်းပစ်ခတ်သည်။ ဤနမိတ်အား ဘုရင်မင်းမြတ်မှ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာကျော် များအား
ခေါ်ယူမေးမြန်းတော်မူရာ လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးတို့တွင် မည်သည့်လူမျိုးဘာသာ ယုံကြည်မှုကိုမှ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၊
မပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း၊ ယခုအဖြစ်အပျက်မှာ တစ်ရာ့တစ်ပါးသော လူမျိုးမှ သူတော်စင်တို့ သွေးမြေကျ၍ ဤသို့
လက်လွန်သွားကြောင်း သံတော်ဦးတင်ရာ အသင်တို့ မိုက်မဲလေစွတကားဟု အပြစ်တော် တင်ကာ
မလိုတမာကုန်းချောသည့် လက်သုံးတော် ၀င်္ကပုဏ္ဏားအား ထောင်သွင်း၍ အကျဉ်းထားစေ အမိန့်တော်သတ်မှတ်ပြီး
အမှန်ပင်သူတော်စင်များပါတကားဟု ယူကျုံးမရဖြစ်ကာ ၎င်းနေရာကို မင်းမှုထမ်းများအား သဲဖြူခင်း၊ ရာဇမတ်ကာပြီး
သတ်စေရန် အမိန့်ချကာ သုံးထောင်ခုနှစ်ရာ ဆရာကြီးမျိုးနွယ်များကို ဆင့်ခေါ်ပြီး မလိုတမာကုန်းချောစကားကြောင့်
၀တ်ကျောင်းတော်လေးဆောင်လှူဒါန်းတည်ဆောက်ပေးမည့်အကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူသည်။ မြေဒူးမြို့တွင်
-ခုတွင် ယိုးဒယားသို့ စစ်မထွက်မီ တိုတောင်းလှသောကာလ၌ သာသနာ့ဂိုဏ်းကွဲများ-ခုနှစ်တွင်(၄)ပါးအား(၄)ပါးတို့မှာ(၄)ပါးကို(၁၃)ချက်(၃)နှစ်မိုးခေါင်ရန် ကိန်းရှိပါကြောင်း ပညာရှိများမှ လျှောက်တင်ကြသည်။(၄)ပါး အခြေအနေ၊ ကျွန်ယုံတော်များအားမေးတော်မူရာ ဆရာကြီးတို့ မချေမငံပြု၍(၄)ပါး ခန္ဓာဝန်ချရာနေရာသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ ခြတောင်ပို့(၄)လုံး ဖြစ်နေသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်(၄)လက်မိုး၍ အစောင့်ထားရန် အမိန့်တော် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ နန်းတော်သို့ပြန်ပြီး ၀င်္ကပုဏ္ဏားမိုက်အား(၄)ပါးကိုရည်စူး၍(၄)လုံး တိုင်းရင်းသားအစ္စလာမ်သာသနာဝင်များ အား ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။(၄)ပါးအကြောင်း(၁၂၄၅-ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလ)
ဘုရားကျွန်တော် မြေဒူးမြို့နေ သင်္ဘောဘလီဝင်၊ တကာကြီးငယ်တို့နှင့် ပသီကျောင်းထိုင် ဆရာမို့ဟရစ်ဒင်
ရွှေဘ၀ါးတော်အောက် ရှိခိုးသံတော်ဦးတင်ပါသည်ဘုရား ။
အင်းဝမင်းဆက် စနေမင်းလက်ထက် မြန်မာသက္ကရာဇ်
သုံးထောင်ခွန်နှစ်ရာတို့သည် ကာသီရွှေဝါ၊ ကာသီရွှေဒုံး၊ ကာသီပန်းဝါ၊ ကာသီမြတ်ကြာ မင်နာနုရပ်၊ မင်းန၀ါဟရပ်၊
မင်းသီဟရပ်၊ မင်းနေမျိုးဂုဏ္ဏရတ်တုိ့နှင့် ၀င်စားလာရောက်ရာ စားမြဲ နေမြဲ ပေးချသနားတော်မူပြီးလျှင် ရွှေချမှန်စီ
ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဒို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကြီးများ Page-9-မြန်မာမွတ်စလင်ကျောင်းသားလူငယ်များ
ယခု ဘုရင်မင်းမြတ်ဘေးတော် အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက် မွတ်စ်လင်မ်လူမျိုးတို့ကို မမြင်ဘူးသည်နှင့်
အပါးတော်တွင် ကျွန်ယုံ ပုဏ္ဏား ဂေါဝိန္ဒကိ မေးတော်မူရာ ဂေါဝိန္ဒပုဏ္ဏားက ၎င်းလူမျိုးတို့သည် ကြက်ငှက်ကျွဲနွားတို့ကို
အရှင်လတ်လတ် လှီးဖြတ်သစား၊ အယူမှားသောသူ လူမျိုးဖြစ်ပါသောကြောင့် ဟင်ဒွတ်စတံဒလင်လိ
(၄)လုံး မြေဒူးမြို့အတွင်း တည်လုပ်သနားတော်မြတ်ခံရ၍ ကျမ်းဂန်နှင့်အညီ ကျင့်ဆောင်နေထိုင်ကြသည်နောက်
ဆရာကြီး မုဟမ္မဒ်ရှောင်ရှန်၊ ဆရာကြီး မိုဟစ်ဗွလ္လာ၊ ဆရာကြီးရှမ္မဒါရ်၊ ဆရာကြီးအွတ်သမံ တို့ကို
အရတောင်းတော်မူပြီးလျှင် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုလွှတ်၍ ၀က်သားကိုစားရ မည်။ ရုပ်ပွားဆင်းတုတို့ကို
ရှိခိုးပူဇော်ရမည်။ ရာဇမာန်ပွား၍ ထောင်မှာ အကျဉ်းချထား၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၊ အသက်ကို အသေသတ်မည်၊
ဒိုအာဆုတောင်းပြီးလျှင် ဦးချစစ်ဂျဒါတွင်းမှာ အသေခံသောကြောင့် ကောင်းကင်က အတိတ်ကြီးနမိတ်ကြီးပြသည်။
ငလျင်လှုပ်သည်။ ဥပ္ပါတ်ပျံသည်၊ တော်လဲသည်။ နန်းတော်ကန်တော့တိုင်ကို မိုးကြိုးပစ်သည်။ မှောင်ကျသည်။
နေမထွက် ကြယ်ပေါ်သည်။ နေ့ကိုညဥ့်အတိ ဖြစ်နေသည်။ နေ့ည၌မကွဲရှိနေသောကြောင့် ဂေါဝိန္ဒပုဏ္ဏားကို ထောင်မှာ
အကျဉ်းထား သင့်၊ မသင့်ကို ချင့်ချိန်၍ အဆုံးစီရင်မည်။ ကြယ်သွားနေသွား အတိတ်ကိန်းခန်းကို နားလည်သူပညာရှိ
တို့ကို ခေါ်၊ အမိန့်တော်နှင့်ခေါ်ပြီးလျှင် မေးတော်မူပြန်ရာ ၎င်းပညာရှိတို့က လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးတွင် တစ်ပါးလူမျိုးကို
မပယ်သင့်၊ ဦးခေါင်းကသွေးသည် မြေတွင်စွန်းငြိပါသောကြောင့် အစားအစာ မွတ်သိပ်ရန်၊ မိုးသုံးနှစ်မခြိမ်းမရွာရှိမည်။
မိုးမှောင်လည်း ခုနှစ်ရက်လည်မှ လင်းမည်၊ ထင်မြင်ပါကြောင်း ရှိခိုးသံတော်ဦးတင်ကြ၍ သူတော်စင် မှန်မမှန်ကို
သုဿာန်ဝမှာ အစောင့်နှင့်ထား၊ မိန့်တော်မူပြီးလျှင် ၎င်း ဆရာကြီးလေးပါးအလောင်းသည် မဖူးမရောင်၊ မသိုးမပုတ်၊
ကျီးငှက်တို့အချဉ်း မှောင်လင်းသည့်နောက် ခုနှစ်ရက်ရှိလျှင် ခြတောင်ပို့လေးလုံး အထူးအဆန်းသည်ကို
ရွှေနားတော်မြတ် ကြားသိတော်မူ၍ ရာဇမတ်ကာရန် ရွှေထီးလေးစင်းအုပ်ထားရှိသည့်နောက်
မိုးသုံးနှစ်မခြိမ်းမရွာရှိသည်နှင့်မြေဒူးမြို့သို့ ထက်ွစံတော်မူ၍ မူးမြစ်တူးဖောက်၊ ရွှေဘိုကန်တော်သို့ ရေသငွ်းတော်မူပါ
ကိုးကွယ် စားသောက်နေထိုင်မြဲ ငြိမ်ဝပ်စွာနေထိုင်ရမည်။ အထက်ကနည်း ရွှေချမှန်စီ ဗလီလေးလုံး မြေဒူးမြို့အတွင်း
တည်လုပ်သနားတော်မူပြန်၍ ငါးနှစ်မြန်မာနှင့် ရောနှောရှိနေသည်ကို ၎င်းမင်းတရားကြီး လက်ထက်ကစ၍
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စ်လင်မ်လူမျိုးတို့ ထင်ပေါ် စည်ပင်ရှိကြပါသည်။ ၎င်းရွှေချမှန်စီ တည်လုပ်တော်မူခဲ့သည်။
သင်္ဘောဗလီသည် ပတိမ်းစားအရေးတွင် သူပုန်လူဆိုးတို့ ဖျက်ဆီးပျက်စီး၊ အမှုထမ်း ဆင်းရဲသားတို့ မတည်မလုပ်နိုင်
ယခုတိုင် ဗလီဝင်လူတစ်ရာကျော်တို့သည် ၀တ်ဝါရိုဇာ နမာဇ် စောင့်ထိန်းရန် မရှိသည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်
ဘုရားကိုယ်စားတော်စားတည်လုပ် မစတော်မူလျှင် ကမ္ဘာထက်ဆုံးတိုင် ကုသိုလ်တော်သည်
အခေါင်အဖူးထူးမြတ်လှသည်။ သိမ်ဗလီဖြစ်ပါ၍ တည်လုပ်မစ သနားတော်မြတ်ခံရပါမည့်အကြောင်းကို
ဒေလီ)ဗာရာဏသီမြို့များက နှင်ထုတ်လိုက်သောသူများဖြစ်ပါကြောင်း ရှိခိုးသံတော်ဦးတင်၍ ကျွန်တော်မျိုးဘေး၊(၄)ပါးတို့သည် သုသာန်ဝမှာ ၀ိုဇူသန့်စင်၍ ဒိုရကအတ် နမာတ်ဖတ်ရွတ်(၄)ပါးတို့ အဆက်အနွယ်ကိုခေါ်၍ ရှေးအစဉ်အလာ ဘာသာထုံးစံကျမ်းဂန်ထွက်ရှိသည့်အတိုင်း ကျင့်ဆောင်
မြေဒူးရှိုက်မိုဟ်ယစ်ဒီန် (ခ) ဦးရွှေတောင်ရေး ရှဂျရတလ်ွအီမံကျမ်းနှင့် ဖသွာအေ့အလွတ်ရှဟူရ်ကျမ်း၊ ၂-ကျမ်းတွဲ စာ-၁၆၉)
ဤသင်္ခါရလောကကြီးတွင် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အားရိုကျိုးသစ္စာရှိသော မွတ်စ်လင်မ်မောင်နှမများအား
မတရားသတ်ဖြတ်၊ အနိုင်ကျင့်၊ နှိတ်ကွတ်ချင်းတို့သည် အချည်းနှီးဖြစ်သွားမည်မဟုတ်။ သေပြီးနောက်
နောင်တမလွန်ဘဝ မဆိုထားဘိ၊ သည်လက်ရှိဘဝမှာပင် လူသားတို့၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး
မွတ်စ်လင်မ်မောင်နှမများ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ထိုသခင်ကြီး ၄ ပါးနှင့် အမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအပြစ်မဲ့
မတရားသတ်ဖြတ်ခံရသော မွတ်စ်လင်မ်ရှဟီဒီများအတွက် ဇေရာဒဟ်ပြု၊ ဒုအာဆုမွန်ကောင်းများ
Posted: 16 Mar 2010 02:09 AM PDT
I woke up this morning thinking about our next holiday. I am so excited. We are going to the harem of monkeys! No, not Vegas.. you wish!
We are going to go and see the colony of the proboscis monkey – the horniest ape the world, that can only be found in SABAH! Yeaa Sabah, wa caya sama lu!
This is gonna be our second time in Borneo, first time I went there was to celebrate my birthday on Mount Kinabalu. This year I would like to celebrate my birthday in Sabah again, because I simply love the land below the wind. The landscape is gorgeous, the food delicious, the ocean crystal clear, the shopping spots exciting and well, the food delicious.
I only eat halal/kosher remember? So anyplace that serves great seafood get extra beanie points from me. Why do you think I haven't gone back to Bali since the first time? It is the pigs!! They were everywhere!! Babi guling here, babi guling there! What do you expect me to eat during my holidays? Maggi mee? Aiyoo.. I have enough of those during the nights that I am lazy to cook. And that is like… every other night, ok!
This time around we would like to take Miki to the River Safari as he loves animals very much and we want him to beatough kid. Too much hanging out at the mall makes us weak. Once in while we all need to get back to nature.
I found out about this Sabah River Cruise/ River Safari during the recent Matta Fair and loved the idea about wildlife watching especially fireflies! Miki has never seen those, it would beagreat experience for him. But I know very little about this activity.
Anybody has been on similar trip care to share experiences with me?
Another question that I was hoping somebody might answer to me – Has anybody died while snorkeling? Because I am afraid of water monsters but I would like to try.
OMG what about sharks? Is there any sharks in Sabah waters? *pengsan*
Posted: 16 Mar 2010 01:04 AM PDT
"Pakatan Rakyat kesal dengan keputusan ini kerana Ahli Parlimen tidak diberi hak untuk bersuara walaupun usul sebegini pernah didebatkan pada tahun 1970-an," katanya. -SK